Somaliland oo Dil ku Xukuntay 17 Qof Qaar kalane Xabsi daa’in
May 17, 2012 - jawaab	Number of View: 182Share
Hargeysa Sooyaal News Network
Maxkamada sare ee militariga Soomaaliland ayaa xukun isugu jira dil iyo xabsi daa’in ku riday rag lagu eedeeyay in ay ku lug lahaayeen weerarkii lagu qaaday saldhiga militariga Soomaaliland, kaasoo ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Ragga la xukumay oo tiradooda gaareyso ilaa 22 ruux ayaa 17 ka mid ah waxaa ay maxkmadu ku riday xukun dil ah , halka 5 soo hartayna lagu xukumay xabsi daa’in sida uu sheegay guddoomiyaha maxkamada sare ee militariga Soomaaliland Col Yuusuf Faarax.
Waxaa uu sheegay guddoomiyaha maxkamada in waqti badan la dhageysanayay dacwada arinta ku aadan, islamarkaana rag la soo eedeeyay ay afkooda ku shegeen in ay ka ka danbeeyeen ama ku lug lahaayeen weerarkaasi.
Guddoomiyaha maxkamada militariga Soomaaliland ayaa sheegay in xeerka iyo Dastuurka Soomaaliland uu ogol yahay in raggan oo kale xukunkooda qaato maxkamada militariga.
Maalin ka hore ayeey aheyd markii raggan la xukumay ay weerar ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada militariga Soomaaliland ay ku sugnaayeen kaasoo sababay khasaare isugu jiray dhamasho iyo dhaawac.